Lama (laamuus) /; Isbaanish: [Laamiya] ama [ʒama] (Lama glama) waa geela reer koonfureed ee Maraykan ah, oo loo isticmaalo hilibka iyo xayawaanka xayawaanka dhaqameedyada Andean tan iyo wakhtigii hore ee Columbus. Heerka sare ee buuxa ee buuxa, waa dherer buuxda, 1.7 ilaa 1.8 m (5.6 ilaa 5.9 ft) oo sare ee sare ee madaxa, waxana uu miisaan u dhexeeyaa 130 ilaa 200 kg (290 iyo 440 lb). Dhalashada, ilmaha yar (loona yaqaan cria) waxay miisaan u dhexeysaa 9 ilaa 14 kg (20 iyo 31 lb). Llamas waxay caadi ahaan ku nooshahay 15 illaa 25 sano, qaar ka mid ah shaqsiyaadka ka badbaaday 30 sano ama ka badan.    Waa xayawaan aad u tiro badan oo ku nool llamas kale sida lo'da. Suufka uu soo saaro llama waa mid jilicsan oo aan lanolin lahayn. Llamas waa kuwo caqli badan oo baran kara hawlaha fudud kadib dhowr marxaladood. Marka la isticmaalayo xirmo, waxay qaadan karaan 25 ilaa 30% miisaankooda jirka 8 ilaa 13 km (5-8 mayl).  Magaca llama (horey loogu soo qoray 'lama' ama 'glama') waxaa laga aqbaley dadka reer Yurub ee ka soo jeeda degaanka Peruvians peru  Llamas waxay u muuqataa inay ka soo bilaabmeen bannaanka dhexe ee North America ilaa 40 milyan oo sano ka hor. Waxay u haajireen Koonfurta Ameerika saddex malyan sanno ka hor inta lagu guda jiro Iskuduwaha Great American. Dhamaadka da'da ugu danbaysa (10,000 ilaa 12,000 sanno ka hor), geelu waxay ku sugnaayeen Waqooyiga Ameerika.  Laga soo bilaabo 2007, waxaa jiray in ka badan toddobo milyan oo llamas iyo alpakas oo ku yaalla Koonfurta Ameerika, iyo iyadoo laga soo dejiyey Koonfurta Ameerika ee qarnigii 20aad, waxaa hadda jira 158,000 llamas iyo 100,000 alpacas oo ku yaala Maraykanka iyo Kanada.
Lamoids, ama llamas (sida guud ahaan loo yaqaano koox ahaan), waxay ka kooban yihiin vicuña (Vicugna Vicugna, Lama Vicugna), guanaco (Lama guanicoe), Suri alpaca, iyo Huacaya alpaca (Vicugna Pacemak, Lama guanicoe Pacemaker), iyo leynka gudaha (Lama glama). Guanacos iyo vicuñas waxay ku nool yihiin duurjoogta, halka alpacas - iyo sidoo kale llamas - waxay ku jiraan kaliya xayawaan guri leh.  Inkasta oo qorayaashii hore ay barbar dhigeen llamas ido, waxay la mid yihiin geela markiiba loo aqoonsaday. Waxaa lagu daray circa Camelus iyo alpaca ee Systema Naturae (1758) ee Carl Linnaeus.  Waxay ahaayeen, si kastaba ha ahaatee, waxay kala sooceen Georges Cuvier 1800 iyagoo ku hoos jira magac aan la joogin guaanaco.  Alpacas iyo vicuñas waxay ku jiraan muuqaalka Vicugna. Lama iyo Vicugna waxay yihiin, labada nooc ee geela runta ah, wakiillada hadda jira ee qaybta aadka u kala duwan ee Artiodactyla ama caleemaha xitaa qallafsan, oo la yiraahdo Tylopoda, ama "busted footed", oo ka soo jeeda qulqulaha ee cagahooda. Tilopoda waxay ka kooban tahay hal qoys, Camelidae, waxayna wadaagaan amarka Artiodactyla leh Suina (doofaarro), Tragulina (chevrotains), Pecora (rinjiyeyaasha), iyo Whippomorpha (boodhka iyo cetaceans, oo ka tirsan Artiodactyla , haddii aanad ahayn dhaqameed, aragtida). Tilopoda waxay leedahay cidhiidhi gaaban ama ka yar mid kasta oo ka mid ah canshuurta walaasheed, oo ka soo horjeeda meelo dhexda u dhexeeya, iyaga oo la wadaago qaar ka mid ah astaamaha, laakiin kuwa kale waxay muujinayaan isbeddel gaar ah oo aan laga helin canshuurta kale.
lama /Llamas waxay leeyihiin xayawaan aan caadi aheyn xayawaan weyn. Llamas dumar ah ayaa loo yaqaan 'ovulators'.  Iyada oo loo marayo ficil-celinta, haweenku waxay sii deyneysaa ukun waxaana inta badan la isku marsiiyaa isku dayga koowaad. Llamas-ka dumarku ma tagaan "estrus" ("kuleyl").  Sida aadanuhu, llama ragga iyo dumarka jinsi ahaan qaangaar ahaan heerar kala duwan. Dumarku waxay gaaraan qaangaadhka da'doodu tahay 12 bilood; ragga ma noqdaan kuwo galmo noqda ilaa saddex sano jir. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Lama&oldid=174866"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Juun 2018, marka ee eheed 12:56.